Online Scam & Kunyengera - Semalt Expert Anoziva Nzira Yokuderedza Kusarura
Webhusaiti inoita basa guru muupenyu hwevanhu munyika nhasi. Mawebhusayithi akawanda anopa zvokwadi uye zvigadzirwa. Kunyange zvakadaro, panewo vamwe vanoshandisa paIndaneti vanofanira kutarisa kune zvimwechetezvo. Ichi chikonzero chikonzero nekuda kwekuwedzera kwehutsotsi nemabasa ekunyadzisa akaitwa paIndaneti.
Oliver King, nyanzvi inotungamira kubva kune Semalt , inopa nyaya dzinogona kubatsira kutarisana nekunyengera kwepakombiyuta uye kukanganisa - trampolini elastici per bambini prezzia.
Inowanzobatana neInternet Scams
Nzira iyo kutsvaga kutsvaga kuwana ruzivo kubva kuvashandi vasingatarisiri inoenderera mberi nekusiyana. Izvo zvinotevera urongwa hwemashumi gumi epamusoro ye internet uye yeema email scams.
1. Nigerian scam
Aya ndiwo emaimeri anobva kuNigerian anonzi ari emadzimambo uye anotarisira nhaka uye anoda rubatsiro rwekuwana.
2. Chinovimbiswa Credit Card Acceptance kana Chikwereti
Vanopa kubvumirwa kwakagadziriswa kwekadhi rechikwereti kana chikwereti. Vanogona kutarisa kutendeseka sezvo mamwe makambani ekadhi rechikwereti anotenga mari.
Idzi ndidzo dzinotambudzwa dzinoramba dzichitamba sweepstakes asi dzisingakundi..
Izvi zvinoshandiswa kushandurazve vashandisi kumawebsite pavanoedza kuvakonzera kuti vawane ruzivo rwevanhu pachavo vachishandisa zvipo zvinoedza.
5. Kubhadhara mari yepamusoro
Inosanganisira kubiwa kusina mvumo yemari yemirairo inopiwa zvinhu zvinodhura. Kamwe kangoiswa mubhangi, iyo scammer inokumbira chikamu pamwe chete nechimwe chinhu. Pave paya apo chiziviso chinoziviswa nezvekurasikirwa kwekubhadhara.
6. Mikana yemabasa
Vanonyadzisa vanopa mukana wekuita basa uye vanokumbira zvikwereti zvebhange zvebhadharo yekutumirwa. Vanotora mukana uyu kuti vape zvinyorwa nokuda kwekubiridzira.
7. Zvipo zvezvipo
Izvo zvinobatsirwa nemhando yehupo yevanhu pavanotumira mari kune zvisiripo zvipo.
8. Zororo rezororo
Kufamba maitiro kunogona kuita sekusununguka, kungoona kuti iyo inodhura miitiro painyoresa nekusvika.
9. Piramidi chirongwa
Izvozvi zvipfumi zvakakurumidza zvakagadzikana nekusiyana kwakasiyana uko kunowedzera kuburikidza ne emaimeri.
10. Ita mari kubva kunyaradzo yeimba
Iko dzimwe nguva ndeyechokwadi, asi vamwe vanokanganisa vangada kushandisa zvakadai sekutumira mari mukutsinhanisa mazano ane mvura. Vanogonawo kutumira mapurogiramu anowanzoita mawindo akawanda anowanzobatsira kune spammers.
Online Scam uye Straud Stats
Kubiridzira kunosanganisira kufungidzira, kushandiswa kwenhema, kana kugadzira mazano kana zvipfeko..Vanhu vanokumbirwa kuti vafunge nezvekufunga nezvekuitika kweizvi zvichiitika sezvo inobata kuchengeteka kwavo zvakare. Cybercrime inotyisa nguva dzose uye inogona kunge inoparadza sezvinoita munhu achipinda mumba. Ivhareji mari yega yega yakakwira ne50% kubva muna $ 197 muna 2012 kusvika kune $ 298 muna 2013 nekurwisana kunowedzera mukugadzirisa. Mari inosvika ku US ndiyo $ 113 mabhiriyoni.
Kuziva Kwekushandisa Kwemari Kutengesa Mari
Mhando dzakawanda kwazvo dzekutengeserana kwepaIndaneti uye kuchema kwe-e-store hazvisi kusununguka, kutaurira zvisiri izvo, uye triangulation kana mule scam. Izvi zvinosanganisira imwe nzira yekubhadhara, uye zvinhu zvinosvika pasina zvinetso. Gare gare, zviremera zvinozivisa kuti kubhadhara kwakanga kusina mutemo.
Mamwe mafomu anosanganisira:
Misika yematombo nezvimwe zvinhu zvisiri izvo
Shill inobhadharwa muvhengi apo vadzidzisi, pamwe chete nezvinodiwa, vanobhadhara pfuma yavo kuti vaende nekutengesa mitengo
Chekuita chebasa rekushandira rinobatanidza mawebsite asina kururama
Chikamu chekubhadhara chikwereti
Kurwisana uye Kubiridzira Rudo
Maroti eIndaneti, Mipikisano, uye Sweepstakes
Mubayiro uye Sweepstakes scams
Kutambidzana nenyaya dzekutsvaga
Kurambidza kushandisa vagari veU.S.
Mail Order Mukadzi scams
Vanotsvaga nevanyengeri vanonzwisisa hupenyu hwevanhu uye vanohushandisa nekuda kwekunakira. Zvimwe zvezvipikisi zvinoshandiswa kune vanhu mumamiriro ezvinhu akaoma zvinosanganisira:
Zvichida kutengesa zvikwereti
Internet pharmacy rusununguko
Mamwe matsotsi ekutsvaga akadai sevashandi vemabasa, utsotsi hwekutsvaga mari, Nigerian scams, piramidhi, kushambadzira kwepabonde
Vaduku nevakuru Vashandisi veIndaneti
Kunyange kunyengedzwa kwekutsvaga mune zvekutsvaga uye zvinyengeri zvingangodaro zvinotambudza uye dzimwe nguva kuvhiringidza, zvinokosha kuti vanhu vose varambe vachichengeteka nekuchengetedza, kusava nechokwadi, uye nguva dzose vachikakavadza zvinhu zvinoita sezvisinganzwisisiki. Kuchengetedza vana nevakuru vakuru, munhu haafaniri kuvimba nemunhu, kuvhara ruzivo, kugara achiziva, kudzivirira mapeji nemagadgets, kubata nguva dzinodzidziswa.
Kubiridzira KwepaIndaneti Njodzi Yebhizimisi
Bhizimisi chero ripi zvaro rinoita basa rayo paIndaneti riri pangozi yebasa rekubiridzira. Zvimwe zvemashoko ekudzivirira kubva pangozi yakadaro dzinosanganisira:
Yakachengeteka uye inodzivirira zvinhu zvose
Usasanganisi bhizimisi nemufaro
Chengetedza pasi IT infrastructure
Tsitsa kombiyuta imwe chete kumabhengi
Vhura chero mapeji ekupinda mukambani
Ita zvidzidzo zvemashoko ekutanga kune vashandi
Nhengo dzinogona kushandisa sangano reNational Fraud Information Center, National Cyber ​​Security Alliance, The Business Software Alliance, uye GetNetWise. FBI ichangobva kusangana neInternational Crime Complaint Center (IC3).